Carruurta iyo caafimaadka | Samfunnskunnskap.no
Kontoroolka dumarka uurka leh iyo dhalmada
Dhimashada caruurta yar yar ee bulshadu waxay ku xidhantahay heerka nolosha ee wadankaas, adeega caafimaadka iyo horumarka daawooyinka laga gaadhay iyo sidoo kale daryeelada bulshada iyo daryeelada kale ee loogu deeqo waalidka iyo caruurta. Maanta Noorwey dhimashada caruurtu aad ayay u hoosaysaa marka loo barbar dhigo wadamada kale iyo waqtiyadii hore labadaba. Dumarka uurka leh ee Noorwey waxay xaq u leeyihiin baadhitaan marka ay uurka leeyihiin oo bilaash ah. Waxa u sameeya baadhitaankaas xarumaha caafimaadka iyo dhakhtarkooda gaarka u ah. Baadhitaanadanu waa xor. Ujeedada laga leeyahayna waxa weeye in la hubiyo hooyada iyo ilmaha uurka ku jira inay helaan daryeel caafimaad, waqtiga uurka, waqtiga dhalmada, iyo ka dib dhalmada. Norwey waxa hooyooyinka lagu la taliyaa inay isbaadhaan 8 ilaa 12 jeer xilliga ay uurka leeyihiin. Inta badan waxey dumarku ku dhalaan isbitaalada waana bilaash.
Dhammaaan caruurta iyo dhallinyarada degan Noorwey waxay helaan adeegyo iyo baadhintaano caafimaad si joogto ah. Laga bilaabo markay caruurtu dhashaan ilaa marka ay iskuulka ka bilaabayaan, baadhitaanadaa waxa sameeya xarumaha caafimaadka ee hooyooyinka iyo caruurta. Marka caruurtu iskuulka bilaabaan waxa baadhitaankooda ka ma,suul ah xarunmaha caafimaadka ee iskuulka.Waxa kale oo jira xarumaha caafimaadka ee dhallinyarada degmo kastaba. Xarumaha badhista caafimaadka iyo xarunta caafimaad ee iskuuladu waa bilaash.
Xarumaha caafimaadka ee caruurta waxay la socdaan sida uu ilmuhu u koroyo iyo koritaankiisu inuu caadi yahay, waxay la socdaan in miisaankoodu caadi yahay, aragoodu caadi yahay, in maqalkodu caadi yahay iyo in ilmuhu hadalka fahmayo oo hadal baranayo. Haddii la ogaado in ilmaha wax ka qaldan yihiin waxaad xarumaha caafimaadka ka heleysaa caawinaad iyo talooyin.
Dhammaan caruurta iyo dhalinyarada degan wadanka Norwey waxey helaan tallaalo ka hortaga cudurada halista ah. Talaalku waa sida ugu sahlan ama ugu fudud ee lagaga hortago cudurada wax dhibaato ahna ma leh. Talaaku ma aha khasab, laakiin dawladdu waxay waalidka kula talisaa inay tallaalaan caruurtooda.
Tallaalka iyo barmaamijka tallaalku waa bilaash, laakiin haddii aad adigu u baahatid tallaal dheeraad ah, tusaale ahaan marka aad wadanka dibadiisa u dhoofaysid markaa waa inaad adigu iska bixisaa lacagtiisa.
Dhammaan carruurtu waxa ay xaq u leeyihiin koritaan ammaan ah.
Dhammaan carruurta iyo dhallinyaradu waxa la siinayaa kontorol caafimaad oo lacag la’aan ah
Dhammaan carruurta iyi dhallinayarada waxa la siinayaa talaal lacag la’aan ah ee nidaamka talaalka carruurta
Dhammaan carruurta waxa la siinayaa daaweyn ilko oo lacag la’aan ah.
Dhammaan carruurta waxay heli gargaar caafimaad wanaagsan oo aan ku xidhnayn dhaqaalaha waalidka.
Haddii dhibaato caafimaad ama dhibaato kale waqti hore la ogaado, waxa la haystaa markaa fursad lagaga caafimaado. Tallaaladu waxa ay ka hortagaan kan amid yihiin dabagoynta cudurada fida.
Rugta caafimaadka iyo adeegga-caafimaadka ee iskuulka
Rugta caafimaadka iyo adeegga-caafimaadka ee iskuulka waa fursad sharciyaysan oo la siinayo dhammaan carruurta, dhallinyarada iyo waalidkood. Fursada waxa ku jira daryeelka hooyada uurka leh, rugta caafimaadka ee carruurta u dhaxaysa eber iyo shan sanno, adeegga-caafimaadka ee iskuulka kuwa u dhexeeya 6 iyo 20 sanno iyo rugta caafimaad ee dhallinyarada.
Adeegani wuxu tiir-dhexaad u yahay doorka degmadu ku leedahay shaqada caafimaadka bulshada waxa aanay ka shaqaysaa caafimaad keenista iyo ka hortagga labada dhinac ee caafimaadka maskax ahaan ama jidh ahaan ba iyo dhinaca bulshada. Shaqada waxa ku jira hagis, baadhitaan-caafimaad, talaal, la socosho iyo in la sii gudbiyo haddii loo baahdo.